Date: 07 janvier 2018 - 10:23
Fa inona moa no tena atao hoe halatra e?
Ny ahy mantsy zao toa tena lasa ny saiko. Ny mangalatra @ karàna amiko toa fanaovan-tsoa @ firenena.
Date: 07 janvier 2018 - 13:58
Ka ilay alainao @ karana ve ataonao ao am-paosinao, sa zarainao @ mahantra?
Date: 07 janvier 2018 - 14:44
Na aiza na aiza aloha lalany dia rehefa karàna no voa de efa fampandrosoana ny firenena zay. Misy fara-faharatsiny Malagasy 3 mba manana au lieu de karàna. Mampisondrotra ny harenan'ny Malagasy no filaza azy satria raha karàna 100 no voa, fara fahakeliny Malagasy 300 izany no mahazo tombony satria tsy vita raha olona 1 no hibata vola miliara andeha hody. Dia raha voaendaka ndray aza ireo Malagasy 300 ireo dia vao miha- mitombo ny mahazo tombo-tsoa.
Oviana moa ilay opération karana tany Tuléar? Nisy nandroba ny karana dia niala ny tanana. Fanontaniana apetrako: nitombo ve ny harin-karena tao an-tanana? ary iza no nanan-karena?